စက်မှုဇုန်အသုံးပြုရန် PTFE ဖုန်မှုန့်အိတ် China Manufacturer
ရေမွန်စက် Bag,ဒေါင်လိုက်စက် Dedusting Bag,ဆန့်ကျင် electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု Bag
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: ရေမွန်စက် Bag,ဒေါင်လိုက်စက် Dedusting Bag,ဆန့်ကျင် electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု Bag
Home > ထုတ်ကုန်များ > အိတ် Dusting > စက်မှုဇုန်အသုံးပြုရန် PTFE ဖုန်မှုန့်အိတ်
 စက်မှုဇုန်အသုံးပြုရန် PTFE ဖုန်မှုန့်အိတ်
လေး။ filtering နည်းလမ်း
ပြည်တွင်းရေး filtration နှင့်ပြင်ပ filtration: အ filtration လမ်းအဆိုအရကနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
1. ပြည်တွင်းစစ်ထုတ်အိတ်: ဓာတ်ငွေ့ပါဝင်သောမြေမှုန့်သည့် filter ကိုအိတ်များ၏အတွင်းစိတ်မျက်နှာပြင်မှတစ်ဆင့် filtered, နှင့်မြေမှုန့် filter ကိုအိတ်များ၏အတွင်းစိတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ ဤသည် filtration နည်းလမ်းပြည်တွင်းရေး filtration ဟုခေါ်သည်။
2, ပြင်ပ filter ကို filter ကိုအိတ် filter ကိုအိတ်: ဖုန်မှုန့်ဓာတ်ငွေ့ filter ကိုအိတ်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်မှတစ်ဆင့် filtered သည်နှင့်မြေမှုန့် filter ကိုအိတ်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကွဲကွာနေသည်။ ဤသည် filter ကိုပြင်ပ filter ကိုအမျိုးအစားဟုခေါ်သည်။
ထည်အဖှဲ့အစညျးရဲ့အဆိုအရသူကသုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်ပါသည်: လွင်ပြင်အထည် filter ကို, မြေမှုန့်အထည်အိတ်, twill filter ကိုပစ္စည်းနှင့်ဘောဇဉ် filter ကိုပစ္စည်းဖောက်လုပ်။
1, ပြားချပ်ချပ် texture: ဒီ, ယက်လုပ်ခြင်း၏အရိုးရှင်းဆုံးပုံစံသည်အတိုင်၏တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ဖောက်၏တစ်ဦးချင်းစီပြောင်းနေပါတယ်, ဒါပေမယ့်လွင်ပြင် texture ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြာနှင့်ခုံဖိနပ်ရန်လွယ်ကူနှင့်အခြားချို့ယွင်းချက်ရန်ခက်ခဲသည်, ထို့ကြောင့်ယင်းယက်လုပ်ခြင်းအဖွဲ့အစည်းကမရှိသလောက်ခဲ့ တစ်သီးသန့်စစ်ထုတ်ရန်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြု;
2, twill ဖွဲ့စည်းပုံမှာ: ကနှစ်ခုအမြစ်များကိုဖန်ဆင်းသည်နှင့်လေးအတိုင်မျှင်ပုဖောက်ချည်နှင့်အတူ interwoven နေကြသည်။ အဆိုပါဖောက်ချည်ချုံ့မှတ်တဖြည်းဖြည်းလက်ဝဲသို့မဟုတ်ညာဘက်ကိုရွှေ့; အဆိုပါ twill တစ်ခုတည်းနှင့်နှစ်ဆ twill သို့ခွဲခြားထားတယ်။ အဆိုပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့် elasticity အဆိုပါ twill ထည်များ၏လွင်ပြင်ရက်ထက်သာလွန်ကြသည်, ထိုစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းသတ္တိကိုအနည်းငယ်နိမ့်နှင့်အင်အားအလွယ်တကူအင်အားသုံးပြီးနောက်မှား, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ wear ခုခံကောင်းသောဖြစ်ပါသည်နှင့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအဆိုပါထိရောက်မှုနှင့်သန့်ရှင်းရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းကောင်းပါတယ်, အရာ ယက် filter ကိုမီဒီယာများ၏အသုံးအများဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
3. အတု texture: အတိုင်သို့မဟုတ်ဖောက်ထည်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအတိုင်နှင့်အဖောက်အတုလိုင်းများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအတု texture ဟာကြိုးများ၏ mobility ကြောင့်ပြာဖယ်ရှားပစ်ရန်, ချောမွေ့ရတဲ့အရာတွေအလွန်ပျော့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့် breathable နှင့်လွယ်ကူသောအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ရေမွန်စက် Bag , ဒေါင်လိုက်စက် Dedusting Bag , ဆန့်ကျင် electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု Bag , ရေမွန်စက် Filter ကို Bag , စက်မှုယက် Bag Filter , YJD-B ကလျှပ်စစ် discharge , နယ်ဖုန် Filter ကို Bag , Air ကိုကွန်ပရက်ဆာ